राजा वीरेन्द्रको नाममा वियर निकाल्दै कहिँ नभएको जात्रा देखाउदै युरोपियन यूनियन ! - खबर खुराक- हरेक खबरमा विषेश खुराक
राजा वीरेन्द्रको नाममा वियर निकाल्दै कहिँ नभएको जात्रा देखाउदै युरोपियन यूनियन !
काठमाडौँ, १० बैशाख ।
स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह देवको तस्विर राखेर स्वीजरल्याण्डको एक मदिरा कम्पनीले वियर उत्पादन गरेर विक्री गरिरहेको खबर सार्बजनिक भएपछि नेपालमा हलचल मच्चिएको छ ।
वियरको लेबलमा हात राखेर मुस्कुराइरहेको तस्वीरसहित ‘वीरेन्द्र वियर’ सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएपछि नेपालीहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । यस विषयमा सामाजिक संजालमा व्यापक बहस भइरहेको छ ।
स्वीस कम्पनीले बियरलाई स्पाइस्ड–हर्ब्ड स्टाइलको बियरको श्रेणीमा राखेको छ । वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार यसको एक बोतलको मूल्य स्वीस फ्रयाङ्क ४४.४० अर्थात ४ हजार ८ सय २७ रूपैंया पर्न जान्छ । त्यस्तै अर्को एक बोतलको मूल्य १.८५ अर्थात करिब दुईसय रुपैंयाँ पर्न आउने उल्लेख छ ।
यसरी स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह देवको नाम र तस्वीर राखेर वियर उत्पादन गरेको राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनले विज्ञप्ती नै निकालेर आपत्ति जनाएको छ ।
सो विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष महेशबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वीजरल्याण्डको एक मदिरा कम्पनीले स्वर्गीय शाहको मदिरा पिउन लागेको फोटो राखेर ‘वीरेन्द्र वियर’ नामको वियर उत्पादन गरिरहेको सत्य हो भने आपत्तिजनक भनेका छन् ।
संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यदि यो विषय साँचो हो भने यो नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र पुर्खाहरूमाथिको नांगो बलत्कार हो । तसर्थ यस विषयमा सत्यतथ्य बुझि उक्त गलत कार्यलाई बन्द गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालस्थित स्वीस राजदूतावास, जेनेभास्थित नेपाली प्रतिनिधीको कार्यालय, उत्पादक कम्पनी लगायत सम्बन्धित पक्षको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
सो विद्यार्थी संगठनले राजा वीरेन्द्रको फोटो राखेर मदिरा उत्पादन गर्ने गलत कार्य समयमै बन्द नभए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी पनि दिएको छ ।